Ny indostrian'ny fitaovana manerantany maharitra any Shina dia mitana andraikitra lehibe manerantany. Tsy betsaka ny orinasa mirotsaka amin'ny famokarana sy ny fampiharana, fa koa ny asa fikarohana dia efa niakatra. Ny akora magnetika maharitra dia mizara ho andriamby tsy fahita firy, andriamby maharitra vy, andriamby maharitra mitambatra ary andriamby maharitra ferit. Anisan'ireny, ny magnet Neodymium tsy fahita eto an-tany dia vokatra manintona be mpampiasa sy haingana.
1. Manararaotra ny fitaovana tsy fahita firy Neodymium maharitra maharitra i Sina.
Sina no mpamokatra harena ankibon'ny tany tsy fahita firy, mitontaly 62,9% amin'ny vokatra mineraly tsy fahita eto an-tany amin'ny taona 2019, arahin'i Etazonia sy Aostralia, 12,4% ary 10% avy. Noho ny tahirin-tany tsy fahita firy, dia lasa ivon-toeram-pamokarana lehibe indrindra eto an-tany i Shina ary ivondran'ny andriamby tsy fahita firy eto an-tany. Araka ny antontan'isa natolotry ny Fikambanan'ny Indostria China Rare Earth, tamin'ny taona 2018, namokatra andriamby Neodymium 138000 taonina i China, mitentina 87% amin'ny vokatra totalin'ny tany, efa ho 10 heny noho ny an'i Japon, ny faharoa lehibe indrindra manerantany.
2. Mampiasaina eran'izao tontolo izao ny andriamby Neodymium tsy dia fahita firy.
Amin'ny fomba fijerin'ny saha fampiharana, ny magnet Neodymium farany ambany dia ampiasaina amin'ny adsorption andriamby, fisarahana andriamby, bisikileta herinaratra, kitapom-bolam-baravarana, fantsom-baravarana, kilalao ary saha hafa, fa ny Neodymium andriamby avo lenta no tena ampiasaina amin'ny karazana herinaratra motera, ao anatin'izany ny motera fitsitsiana angovo, motera fiara, famokarana herinaratra, fitaovana fampitaovana horonantsary mandroso, môtô ascenseur, sns.
3. Ny fitaovana Neodymium tsy fahita any Shina dia miakatra hatrany.
Hatramin'ny 2000, Sina no mpamokatra andriamby Neodymium tsy manam-paharoa lehibe indrindra eto an-tany. Miaraka amin'ny fampivoarana ireo rindranasa any ambany dia mitombo haingana ny fivoahan'ny fitaovam-pandrefesana NdFeB any Sina. Raha ny angon-drakitra nataon'ny Fikambanan'ny Indostria China Rare Earth amin'ny taona 2019 dia 170000 taonina ny vokatry ny banga Neodymium voafitaka, mitaky 94,3% ny totalin'ny vokatra Neodymium andriamby tamin'io taona io, ny NdFeB namatotra dia nitentina 4,4%, ary ireo vokatra hafa tanteraka. 1,3% ihany no nanisa.
4. Ny famokarana andriamby Neodymium ao Shina dia andrasana hitombo hatrany.
Ny fanjifana any ambanivohitra eraky ny NdFeB dia zaraina amin'ny indostrian'ny motera, bus sy ny lalamby, robot manan-tsaina, famokarana herinaratra ary fiaran'ny angovo vaovao. Ny taham-pisondrotan'ireo indostria etsy ambony ao anatin'ny dimy taona ho avy dia hihoatra ny 10% avokoa, izay hitarika amin'ny fitomboan'ny famokarana Neodymium any Shina. Tombanana fa ny fivoahan'ny andriamby Neodymium any Shina dia hitazona taham-pitombo 6% ao anatin'ny dimy taona ho avy, ary hihoatra ny 260000 taonina amin'ny 2025.
5. Ny fangatahana fitaovana avo lenta tsy dia fahita firy eto an-tany dia antenaina hitombo.
Ny andriamby avoakan'ny tany tsy fahita firy dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny toekarena ambany karbaona, toy ny indostrian'ny famokarana angovo sy fiarovana tontolo iainana. Amin'ny maha-firenena manerantany azy dia mampiasa vola be amin'ny indostria fanodinana karbaona ambany, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana ary mampiroborobo ny vokatra maitso, ny firenena manambola be amin'ny indostria mpamokatra karbaona ambany, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana ary hampiroborobo ny vokatra maitso Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostria vao misondrotra toa ny fiara mpitondra angovo vaovao, robot mpamokatra herinaratra ary ny famokarana marani-tsaina, hitombo ny fangatahana andriamby maharitra tsy fahita firy eto an-tany. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ireo indostria vao misondrotra dia antenaina hitombo ny fangatahana fitaovana avo lenta tsy dia fahita firy eto an-tany.
Fotoana fandefasana: Mey-06-2021